Kungani abantu bengavuli ama-tuck shops emakhaya? | Scrolla Izindaba
Kungani abantu bengavuli ama-tuck shops emakhaya?
Njengoba ukuntuleka kwemisebenzi kusaqhubeka nokucekela phansi abantu bendawo e-Limpopo kungani bengakwazi ukungena emnothweni wokuvula izitolo?
Ngichithe isonto lonke emadolobheni kaMasipala wendawo wase-Greater Letaba esifundeni sase-Mopani, esifundazweni sase-Limpopo.
Kulolu chungechunge ngigqamisa impi ethule phakathi kwabanikazi bezitolo abaqhamuka emazweni angaphandle abafuna ukuba nezitolo ezindaweni zasemakhaya.
Bathi kunemali enkulu emakhaya futhi wonke umuntu ufuna ucezu lwayo.
Ziningi izipaza eziphethwe izizwe eziningi zakwamanye amazwe, kodwa ngibe nelukuluku lokuthola ukuthi kungani bengekho abantu bakuleli abasebenzisa leli qhinga lebhizinisi elidlondlobala kangaka futhi bakhe izipaza ezindaweni zasemakhaya.
Abantu abavela emazweni angaphandle ikakhulukazi abavela e-Ethiopia, i-Somalia, i-Pakistan, i-Bangladesh kanye ne-India sebezinzile futhi baqhuba amabhizinisi aphumelelayo ekubeni abantu bakuleli behlupheka ngenxa yobumpofu.
Ngokolunye ucwaningo cishe u-70% wezitolo ezincane zakuleli ezabantu abaqhamuka emazweni angaphandle. Uma kuyiqiniso lesi isibalo esiphezulu kakhulu kunesibalo sabantu abaqhamuka emazweni angaphandle abasebenza kuleli.
Okwamanje abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili bathembele ekuthengeni izidingo zabo zansuku zonke kulezi zitolo zabantu bangaphandle.
Kusukela ekuqaleni konyaka ka-2000 iziphaza bezilokhu zikhula futhi seziphenduke zaba izindawo zokugcina izimpahla ezinkulu futhi ziphakela izindawo ezikude kakhulu zikaMasipala.
Iningi lamabhizinisi angaphansi kwendawo izindawo zokwakhiwa kwezitini notshwala. Amathaveni aheha abancane nabadala okuhlanganisa nezinye izingane ezisencane.
Emuva kokuphothula umatikuletsheni intsha isala ingenalutho yokwenza uma ingakwazi ukukhokhela imfundo yaseNyuvesi. Abanye bathutheleka e-Polokwane noma e-Gauteng, kodwa abantu bakule ndawo bayayesaba le ndlela yokuphila njengoba bethi bazoxhashazwa ngokwamukela noma iliphi iholo ukuze baphile. Ngakho bahlala esigodini njengoba impilo ishibhile futhi beyijwayele.
UThapelo Nkuna owaqeda umatikuletsheni ngo-2020, uthe impilo inzima kule ndawo . “Uvuka njalo ekuseni ubhekene nezinselelo ezifanayo ungenalo ithemba lekusasa elingcono,” kusho uThapelo.
Abanye abadala bazwakalise ukukhathazeka ngokuthi ukungabibikho kwezinsiza kulezi zigodi kwenze abantu abasha bazitika ngotshwala okuholela ekwenyukeni kwezinga lobugebengu.
Pho kungani bengalisebenzisi leli bhizinisi lokuvula iziphaza ezichumayo? Ngithole ukuthi abanikazi beziphaza bakwamanye amazwe baya emindenini eneziphaza bayinikeze imali yokuqashisa kuyona izitolo zabo.
Abantu bakuleli bathi abakwazi ukuqhudelana neziphaza zabantu abaqhamuka emazweni angaphandle njengoba bona bethenga kubahlinzeki abajwayelekile kanti izitolo zabaphuma emazweni angaphandle zinabahlinzeki bazo abashibhile.
I-Scrolla.Africa ibe nengxoxo ekhethekile noNdlunkulu wesizwe sama-Raphahlelo uShapo Johanna Raphahlelo endlini yasebukhosini ukuthola ukuthi iziphi izinkinga ababhekana nazo mihla namalanga. Uqinisekise ukuthi amadolobha namalokishi angaphezu kuka-26 kuMasipala i-Greater Letaba abanazo izindawo zezitolo noma izinxanxathela zezitolo okwenza umnotho weziphaza uqine.